प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन, प्रमाणपत्र सक्कली हो या नक्कली ? - प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन, प्रमाणपत्र सक्कली हो या नक्कली ?
२०७6, ३ बैशाख, 08:10:36 AM
काठमाडौं । हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा समता शिक्षाा निकेतनलाई हस्तान्तरण गरेको ‘वल्र्ड बुक अफ रेकर्ड’ (डब्लुबिआर) प्रमाणपत्र नक्कली रहेको खबर बाहिरीएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै दिएको सम्मान प्रमाणपत्र नक्कली भेटीनु पक्कै पनि सुखद समाचार हुन सक्दैन ।
सबैभन्दा सस्तो शुल्कमा शिक्षा प्रदान गरेबापत प्राप्त सो प्रमाणपत्रमा के लेखिएको छ भनेर हस्तान्तरण गर्नेहरुले ध्यान दिएको पाइएन । उनीहरुले हस्तान्तरण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली थियो ।
प्रमाणपत्रमा सन्तोष शुक्ला नाम गरेका व्यक्तिले उक्त विश्व रेकर्डलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले वकिल भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर गुगलमा उनका बारेमा सर्च गर्दा उनको संलग्नता वल्र्ड बुक अफ रेकर्डको प्रमाणीकरणमा मात्र देख्न सकिन्छ । उनको नाम सर्वोच्च अदालतको वकिलको सूचिमा पनि छैन । नागरिक दैनिक